Ginimbi Archives » 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
Lemuel chekai	 May 9, 2019
Self knighted controversial businessmen, Wicknell Chivayo has weighed in on fellow flamboyant businessman Ginimbi and radio personality V-Candy relationship saying the two are just having some casual sex. Commenting on Instagram Chivayo…
Lemuel chekai	 Nov 1, 2018
Fast-rising Zimdancehall crooner Nicodimus "Jah Signal" Mutize says veteran gospel musician, Pastor Charles Charamba did not approve the use of "Kana Vanhu Vangu" lyrics on his trending Sweety (Shinga Muroora) song. Since Zimdancehall…
Jeoffrey Ncube	 Oct 22, 2018
Staff Reporter	 Oct 15, 2018
Controversial businessman and socialite Genius "Ginimbi" Kadungure will be hosting Nigerian hip hop superstar, Ice Prince born Panshak Zamani at his elegant night hub, Sankayi this Friday. The "Oleku" hitmaker comes as a surprise…
Shorai Murwira	 Oct 1, 2018
The Eloko Oyo hit-maker is being brought to Zimbabwe by the socialite Genius “Ginimbi” Kadungure of G-Entertainment and he is going to share stage with Zimbabwe’s super star Oliver Mtukudzi, and rising rhumba star Juntal ,among others.
Lemuel chekai	 Apr 24, 2018
Flamboyant businessman and the new face on Zimbabwe gig promoters block, Genius 'Ginimbi' Gadungure has revealed that his debut concert that featured Nigerian superstar, Davido did not yield much profit as he expected. The gig which he…
Lemuel chekai	 Apr 17, 2018
Just a few days ago Twitter went ablaze with battle lines being drawn between the North and South of Samora (Machel Avenue), concerns rising over who should and should not attend 'Unplugged,'. As if that was not enough, judgement day is…
Munashe Chokodza	 Apr 11, 2018